နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖိုင်ဘာအချိန်! – ကမ်းလှမ်းမှုကို t.o.m. 31/3! | Holmbygden.se
အပေါ် Posted 14 မတ်လ, 2017 အားဖြင့် Holmbygden.se
ယခုနောက်ဆုံးဖိုင်ဘာဘရော့ဘန်းနှင့်အတူ Holmes ခရိုင်ချိတ်ဆက်ဖို့အချိန်. ဤသည်နေ့ရက်ကာလ Holmes Fibers အဖွဲ့ဝင်များကဘယ်မှာသည်အထိမေးလ်သေတ္တာများအတွက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံရရှိ 31 မတ်လတစ်ဦးလျှော့စျေးနှုန်းအဘို့အဆက်သွယ်နိုင် 18 400 Kr (1500 စကားကနေရေးဆွဲ Kr. အသိအမှတ်ပြု 19 900 Kr). တောင်မှသူတို့အယနေ့န်ဆောင်မှုများအသုံးချချင်ကြပါဘူးတဲ့သူ, အနာဂတ်လိုအပ်ချက်အဘို့အိမ်တော်ကို connect!
အဲဒီအကြောင်းပြီးနောက်ဖြစ်ပါသည် 3,5 အဖွဲ့ဝင်ခေါ်ယူမှုနှင့်အတူ Holmes Fibers ဘုတ်အဖွဲ့ကခဲယဉ်းအလုပ်၏အနှစ်, အစည်းအဝေးများ, application များ M.M.. က Holmes အတွက်ပိုက်ကွန်ဆွဲလိမ့်မည်ဟု ServaNet ရှိကွောငျးယခုရှင်းပါတယ်အဖြစ်. ServaNet လည်း Sundsvall ထံမှ interurban fiber-optic ကွန်ယက်ကိုပြုကြလိမ့်မည်သောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, အရာကပိုကလူအပြင်ဘက် Holmes Fibers မြစ်ကတည်းကပူးပေါင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်.
အစောပိုင်းအဆင့်မှာဝင်းကိုယ်တိုင်က၏ဆွေးနွေးချက်ရှိခဲ့သည် Holmes နှင့်သင်တို့အထဲ၌ cable ရဲ့သင်္ချိုင်းဘို့စီစဉ်ရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ဖြစ်နိုင်သည်အိမ်တော်ကိုရိုး၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တူးနောက်ဆုံးနည်းနည်းတက်ပေါ်မတ်တပ်ရပ်နိုင်. ပူဇော်သက္ကာကိုယနေ့, သို့သော်, နှစ်ဦးစလုံးတူးဖော်ခြင်းအပေါင်းတို့သည်လမ်းပါဝင်သည်, မြို့ရိုးထဲမှာတွင်းအောင်. သငျသညျကွန်ယက်၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုလိုခငျြသို့မဟုတ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ကယနေ့မသိရပါဘူး, သငျသညျကိုလညျးကြေးပေးသွင်းနှင့်အတူစောင့်ဆိုင်းနိုင်ပါတယ်. ဤနည်းအားဖြင့်, အိမ်နေဆဲကွန်ယက်ချိတ်ဆက်, သူ့ဟာသူအတွက်ဖြတ်ကုန်ကျစရိတ်ထက်ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးများကိုသိသိသာသာပိုပြီးတိုးပွါးလာရာ. အဆိုပါအချိန်ဇယားကိုသုံးလအတွင်းမြေပြင်အတွက်ဂေါ်ပြားထားရန်ဖြစ်ပါသည်, ဇွန်လအတွက်.
အဆိုပါအသင်းအဖွဲ့ယနေ့ဖိုင်ဘာပုံဆွဲ၏ဖြစ်စဉ်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့သင်တန်းဆက်လက်, ServaNet ကောင်တီဘုတ်အဖွဲ့ဆန့်ကျင်လျှောက်လွှာများနှင့်တာဝနျကိုလွှဲပြောင်းယူပေမယ့်. သို့သော်ထိုသို့ဖိုင်ဘာရှိသည်သို့မဟုတ်မရှိမရှိရွေးချယ်ဖို့တစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းမှတက်သည်ယခု. အဘယ်သူမျှမဘုံအသင်းအဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဒီအဘို့, အရှင်ရှိပါတယ်. အဘယ်အရာကိုအခန်းကဏ္ဍ Holmes Fibers ထို့နောက်ယခု မှစ. တင်ပြခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးကြသည်နှောင်းပိုင်းကနွေဦးအတွက်နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးတွင်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်အဖွဲ့ဝင်များကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်လိမ့်မည်ရပါလိမ့်မယ်. Holmes ဖိုင်ဘာနှင့်ယခင်ဆောင်းပါးများအကြောင်းပိုမိုဤနေရာတွင် Read.
န်ဆောင်မှုများ၏အကွာအဝေးအကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက, တွက်ချက်မှုဥပမာ, အခြေအနေများ M.M.. အဆိုပါမေးလ်တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်.
သည်အခြားကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအများကြီးအမှုသည်ကိုယ်တိုင်ကအကြောင်းကိုသာ Holmes အတွက်ဘရော့ဘန်း၏ချဲ့ထွင်မှုဖြစ်ပါတယ်လိုပဲ – အစာရှောင်သည်အင်တာနက်, တီဗီန်ဆောင်မှုများနှင့် IP တယ်လီဖုန်း. ခရိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အနာဂတျအတှကျအခွခေံအခွအေနမြေားကိုဖန်တီးရန်ပေါင်းစပ်. Holmes Fibers ဘုတ်အဖွဲ့မှခရီးစဉ်အပေါ်ဖြစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းတက် Sum မှ allra första facebookinlägg citeras; “ကျနော်တို့အနာဂတ်၌အကြှနျုပျတို့၏ဇာတိမြေအသက်ရှင်ရန်ဆက်လက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိမြေဖို့အရေးပါသောအဘရော့ဒ်ဘန်းကွန်ယက် access ကိုရလိမ့်မည်ကြောင်းသေချာစေရန်တိုးတက်မှုအတွက်အလုပ်ကိုတင်ပြခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုခငျြ. ငါတို့ကလေးများနှင့်မြေးများနှင့်အခြားသူများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လှပသောဇာတိမြေအတွက်အသက်ရှင်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးစေခြင်းငှါကြပါစို့။”